Kedu otu vidiyo YouTube nwere ike isi melite SEO?
N'ụbọchị anyị, YouTube na-eje ozi dị ka ụzọ magburu onwe ya si enweta okporo ụzọ na enweghi ike ịnweta oke. Ọ bụ ihe nzuzu ịghara iji ikike a mee ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwalite saịtị gị. Dị ka data ndekọ data, YouTube bụ search engine nke abụọ site nha ya na Google. Kwa ọnwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ atọ na-eduzi ọchụchọ na YouTube. Ọ bụ ya mere ọ bụ ohere dị ịrịba ama maka ndị nwe ụlọ ebe nrụọrụ weebụ na-ekemepụta vidiyo maka YouTube. Otu vidiyo nke kachasị mma na nke mara mma na ajụjụ a na-ewu ewu nwere ike iwetara gị ego dị elu ma melite okporo ụzọ gị. Ọzọkwa, YouTube bụ ebe zuru oke iji wuo njikọ dị mkpa na saịtị gị na-enweghị ihe ọ bụla. Otú ọ dị, ndị ọrụ mgbasa ozi a na-eche otu nsogbu ahụ dị ka ndị na-achọ nchọnchọ. Nke a bụ nnukwu asọmpi. Ndị nwe ụlọ ahịa nke oge ọ bụla, yana ndị na-ede blọgụ, bulite vidiyo nke vidio na ikpo okwu mgbasaozi a. Ọ na-esiri m ike ịhụ n'etiti ọtụtụ nde ndị ọzọ. N'ịtụle asọmpi a dị elu na YouTube, ndị na-ere ahịa n'Ịntanet na-eche otú ha ga-esi mee ka ndị mmadụ kirie vidio ha karịa ọtụtụ nde ndị ọzọ. Azịza kasị mkpa maka ajụjụ a bụ njikarịcha nchọgharị. Ọ na-arụ ọrụ dịka engines ọchụchọ, na-eme ka njirimara mara ma na-adọta ndị ọrụ na ọdịnaya. Obughi ezi uche imeputa ihe omimi vidiyo nke ndi adighi anya gi. Ọ bụ ya mere ị ga-eji tinye oge ụfọdụ, ego na mgbalị n'ime nkwalite akaụntụ YouTube gị iji mee ka okporo ụzọ dị mma karịa ndị na-asọ mpi n'ahịa gị. Ya mere, ka anyị tụlee otú nyochacha njirimara search engine nwere ike isi jikọta ya na nkwado YouTube na ihe kachasị mma usoro anyị kwesịrị ime iji bulie okporo ụzọ weebụsaịtị anyị.
SEO dị mkpa
Tupu anyị amalite ịtụle usoro nkwalite anyị kwesịrị ime iji mekwuo ọnụ ọgụgụ nke ndị na-eso ụzọ YouTube ma na-adọta okporo ụzọ ezubere iche ebe nrụọrụ weebụ anyị, m ga-achọ ịnye gị akwụkwọ nke ihe ịrịba ama dị ịrịba ama nke YouTube na-eji mgbe vidiyo ogo:
njide nke ndị na-ege ntị;
kachasị aha mkpado aha;
mkpuru okwu na mkpado nkọwa;
ogologo nke vidiyo;
ọnụ ọgụgụ nke echiche;
ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na-edebanye aha gị na peeji nke mgbe ị na-ele vidio;
ime ihe ngosi vidiyo;
ọnụ ọgụgụ nke mmasị na mmasị.
njikwa njirimara YouTube
ndị na-egwu YouTube na-elele vidiyo vidio 5 kwa ụbọchị.Ọ pụtara na ị nwere ohere magburu onwe ya ịzụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị ma jikọọ ya na ndị ahịa gị. SEO na YouTube na-eje ozi fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na Google. N'ebe a, ihe ọ bụla na-amalite site n'inwe àgwà na iche iche na ibe. Nchịkọta nhọrọ YouTube kachasị na-enyere ndị ọrụ aka ịghọta ihe vidiyo gị dị na ma kpebie ma ọ dabara na ha na-atụ anya ma ọ bụ. Site n'enyemaka nke isiokwu ọchụchọ dị mkpa na utu aha na nkọwa, ndị ọrụ nwere ike ịmepụta vidiyo na ngwa ngwa dị ka bọtịnụ blọọgụ YouTube nwere ike bulie vidiyo gị na nsonaazụ ọchụchọ. Ọzọkwa, njirimara na peeji nke na-eme ka ohere nke obere vidiyo gị na-etinye na TOP nke nsonaazụ ọchụchọ Google maka ọchụchọ ọchụchọ dị elu gị.Ihe dị mkpa na nchekwa YouTube bụ isi vidiyo, nkọwa na meta mkpado. Ọ pụtara na aha gị bụ ihe kachasị mkpa maka ịmepụta isiokwu vidio, isiokwu, na isiokwu gị. Ọnụ ọgụgụ nke ederede na aha nwere oke. Ọ pụtara na ịkwesịrị ịtinye ozi kachasị mkpa ma dị oke mkpa na nso mmalite nke aha gị iji mee ka ọhụhụ abụọ na ndị ọrụ YouTube chọta ya Source .